Iindaba -2020, isenokuba ngunyaka wokulwa kweBitcoin
Kutshanje, iBitcoin ibonakala ikwingxaki. Nangona ixabiso leBitcoin libonakala lingazinzanga kakhulu, imali yedijithali ikwixesha lokudityaniswa kwezi veki zimbini zidlulileyo, emva kokubetha kancinci i-7 470 yeedola. Ukuhambahamba phakathi kwendawo ephezulu ye-6,000 yeedola kunye nendawo ephantsi ye- $ 7,000. Emva koko, iya kuphi iBitcoin?
Kangangexesha elide, abantu bebethandabuza malunga nexabiso elisisiseko ledatha ye-imali yedatha. Baye badwelisa isantya sentengiselwano seBitcoin "esicothayo", ii-Ethereum hacks, kunye nezinye "iintsilelo" kumzi-mveliso, bebanga ukuba olu didi lweeasethi alunakamva. Nangona kunjalo, kwihlabathi lanamhlanje elinamagingxigingxi, imeko yezoqoqosho olukhulu iyakhula, ngakumbi ii-cryptocurrensets, ngakumbi iBitcoin.
Ngokwengxelo epapashwe yiBloomberg, iBitcoin yakha amandla kwimarike yenkomo enkulu. Ingxelo igxininise ukuba i-2020 iya kuba ngunyaka apho iBitcoin iba yigolide yedijithali. "Lo nyaka luvavanyo oluphambili lokutshintsha kweBitcoin ukuya kwi-quasi-currency efana negolide, kwaye silindele ukuba iphumelele olu vavanyo."
Inani labantu abanomdla kwi-blockchain nakwi-cryptocurrency liyanda
Ngokophando olwenziwe nguPaxful, intengiso ye-P2P ye-bitcoin yentengiso, abantu baseMelika abanolwazi ngee-cryptocurrensets babonakalisile ukwanda komdla kwitekhnoloji ye-blockchain nakwii-cryptocurrensets. Eli qela labantu liya ngokuya lijonga iiasethi zedijithali njengendawo yenkqubo yemali “enesiphene” yemveli.
Ngokwengxelo yophando ekhutshwe nge-23 ka-Epreli, i-cryptocurrency ikhula njengeasethi. Phantse i-50% yabaphenduli bakholelwa ukuba imeko kaxakeka ngaphakathi kwinkqubo yemveli yemali iya kusebenza njengethuba lokunceda abantu batshintshe ingqalelo yabo kwi-Bitcoin njengenye indlela.
Ngokophando, ezona zinto zisetyenziswayo kwiBitcoin zibandakanya iintlawulo zokwenyani (i-69.2%) kunye nokulwa nokunyuka kwamaxabiso kunye nenkohliso (50.4%).
UArtur Schaback, igosa eliyintloko elisebenza kunye nomseki osebenzisanayo wePaxful, wathi kudliwanondlebe: “Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba abantu abaninzi bakholelwa ukuba ukwamkelwa okuqhelekileyo kuya kufezekiswa kwiminyaka emi-6 ukuya kweli-10 ezayo. Ngokuchasene noko, abanye abaphenduli bakholelwa ukuba efanayo Ibhola ye-cryptocurrency iya kugqabhuka ngexesha elifutshane. Ndinethemba lemeko yokuqala, ke ndicinga ukuba njengeshishini, kufuneka sizabalazele ukwenza iimveliso ezininzi kwaye sisebenzise iimveliso ezininzi kumatyala osetyenziso lobomi bokwenyani. Nceda ukhawulezise ukwamkelwa okuqhelekileyo. ”
Kwimeko yesifo sesithsaba sesithsaba esitsha, uPaxful ukholelwa ukuba zombini i-cryptocurrency kunye neenkqubo zemali zesiko ziyavavanywa, nto leyo ichaza kwinqanaba elithile ukuba kutheni ixabiso le-BTC linyuka njengoko i-BTC iba yindawo ekhuselekileyo.
USchaback ugxininise ukuba xa kuthelekiswa ngaphambili, ukuqonda kwabantu ngeBitcoin ngokungathandabuzekiyo kuphezulu ngoku. “Ndiyakhumbula xa sasiqala, akukho mntu wayazi ngeBitcoin kwaye wayecinga ngegama elithi 'Bitcoin'. Nangona kunjalo, kwiziphumo zophando kulo nyaka nakulo nyaka uphelileyo, abantu abaninzi bevile ngeBitcoin. Abantu abaninzi bayayidibanisa neengcinga ezahlukeneyo ezinje ngemali kunye netekhnoloji. Kusekude ukuba sihambe, kodwa ndinomdla wokubona iimveliso ezininzi eziza kunceda ekufumaneni izinto eziphambili. ”
Ngokumalunga nezithintelo zokwamkelwa komntwana, uphando luye lwagxininisa ukuba i-53.8% yabaphenduli bakholelwa ekubeni ukunqongophala kolwazi olufanelekileyo kuthintela ukwandiswa kweemali zokugcina imali.
Ngokwengxelo, abaphenduli bakholelwa ukuba ezona zinto ziphambili ezincedayo ekwandiseni inqanaba lokwamkelwa yimigodi ehambayo, ukubuyisela ii-altcoins, utyalomali lwamaziko kunye nokusetyenziswa kweetekhnoloji ye-blockchain.
I-COO ka-Paxful igqabaze malunga nemiceli mngeni yexesha elizayo: “Owona mceli mngeni mkhulu iselulwazi malunga ne-cryptocurrency ngokwayo. Siyazi ukuba abantu abaninzi bayivile loo nto, kodwa ndicinga ukuba sisizathu esingalunganga, njengokungcakaza kunye nenqanaba lokukhwabanisa. Ngenxa yezi zinto, abaphulaphuli abaqhelekileyo basenoloyiko. Njengomzi mveliso, lo ngowona mngeni wethu mkhulu. ”
Ixesha elizayo le-Bitcoin liyaqhubeka nokufumana kwakhona
Emva kokudibana nokwehla kwevolumu yokuthengisa kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, iBitcoin yevolthi yokuthengisa ikamva sele iqalile ukubuyela kwakhona. Ngokwedatha yakutshanje ye-CME, iimveliso zayo zibetha phezulu kwinyanga ephelileyo ngokweeakhawunti ezisebenzayo, kunye nenqanaba lokukhula konyaka le-161%.
Ngokweengxelo, umlawuli wase-US, iKhomishini yoKhuseleko noTshintshiselwano (i-SEC) iqinisekisile ukuba iNgxowa-mali yeMedallion (iMedal Fund) phantsi kweRenaissance Technologies ngoku inokungena kwimakethi ye-Bitcoin yexesha elizayo. Le ngxowa mali yaziwa ngokusebenza kwayo okubalaseleyo kutyalo mali ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka.
Ngokwengcaciso, i-Renaissance Technology iza kubonelela ngekontrakthi yekamva ye-CME Group efumana imali, i-CME ngomnye wabanikezeli bexesha elizayo bokuqala.
Ingxowa mali yeedola ezili-10 leedola phantsi koKuvuselelwa kutsha nje yenze igama kwimithombo yeendaba. Nangona intsholongwane entsha izifake kwiimarike zehlabathi jikelele kwingxubakaxaka eqhubekayo, ingxowa-mali ifumene ukukhula kwama-24% ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka. Ngokwe-CNBC, isikali solawulo lweNgxowa-mali yeMedali sijikeleze i-US $ 10 yezigidigidi, elingana ne-RMB 70 yezigidigidi. Uqikelelo lwesikali solawulo samashumi ezigidi zeedola, ingeniso yalo nyaka imalunga ne-3.9 yezigidigidi zeedola zaseMelika, elingana phantse neebhiliyoni ezingama-30 ze-yuan; emva kokutsala imirhumo yolawulo kunye nokwabelana ngentsebenzo, ingxowa-mali inenzuzo nge-2.4 yezigidigidi zeedola zaseMelika, elingana ne-17 yezigidigidi ze-yuan.
Ngokwengxelo yeWall Street Journal, ukusukela nge-14 ka-Epreli, ingxowa-mali yeembasa ine-39% kulo nyaka. Nakwimakethi yentengiso kaMatshi “Great Falls” engakhange ibonwe nguBuffett ebomini bakhe, iMedal Fund isafumene i-9.9%. Kwinyanga enye, i-S & P 500 yehla nge-12.51%, kwaye i-Dow yehla nge-13.74%, zombini zibetha ukwehla okukhulu ngenyanga ukusuka ngo-Okthobha u-2008.
Alithandabuzeki elokuba le ngxowa-mali yeembasa, engazange ilahlekelwe yimali ukusukela oko yaqalayo kwaye inokufumana kwakhona imbuyekezo yemihla ngemihla ngexesha lobunzima bezoqoqosho, imele ukwamkelwa kwemali eyinkunzi yemveli kwintengiso ye-cryptocur lwemali, kwaye ibophelelekile ukuzisa enkulu Izibonelelo kwiimarike zeCME zexesha elizayo zeBitcoin. ubumanzi.
Umgaqo-nkqubo ongenamkhawulo wokunciphisa unokukhuthaza ukulwa neBitcoin
Ngaphandle kokuhla ngamandla kwamaxabiso eeasethi, kubandakanya ne-cryptocurrensets, umbono woqoqosho lwehlabathi uhlala ukhathaza. Kwiiveki ezintlanu ezidlulileyo, abasebenzi abazizigidi ezingama-26 benze isicelo sokungabikho kwemisebenzi eUnited States kuphela. Kwinqanaba lenkampani, iinkampani zophando zilindele ukuba inkampani ilahlekelwe zizigidi zeerandi kwingeniso.
Ke ngoko, ayimangalisi into yokuba iibhanki eziphambili noorhulumente kwihlabathi liphela benze iinzame zokusindisa abantu, iinkampani, kunye neenkampani zonke.
Ukunciphisa isoyikiso sokudodobala kwezoqoqosho okujamelene ne-United States ngenxa yefuthe lobhubhane, iFed "inyathelo elikhulu" elingazange labonwa ngaphambili. Ngorhatya lwango-Matshi 15, iFed yehlisa inzala ukuya kwi-zero kwaye yasungula inkqubo enkulu yokunciphisa i-US $ 700 yezigidigidi. Ngomhla wamashumi amathandathu kwinyanga yoKwindla, iFederal Reserve yaphehlelela iZiko eliXhasa ukuXhasa iPhepha loRhwebo (i-CPFF) kunye nePrayimari yokuThengisa ngeMali yokuThengisa (PDCF) ukubonelela ngemali kubanikezeli bamaphepha. Ngomhla wamashumi amabini anesithathu ku-Matshi, i-Federal Reserve yakhupha umgaqo-nkqubo wokunciphisa izinto ezingenamda (QE) kwaye yaqala "ukuthenga" phantse zonke iimveliso zekhredithi kwintengiso ngaphandle kwezitokhwe zokubonelela ngenkxaso mali eyaneleyo kwintengiso.
Abantu abaninzi bakholelwa ukuba amanyathelo alandelanayo e-Fed abonisa nje ubuzaza bemeko yase-US.
I-Bhanki yaseJapan (i-BOJ) ikwaqinisekisile le meko. Ngokwe-Nikkei Asia Review, ecaphula abantu abawaziyo lo mbandela, iBhanki yaseJapan ifuna ukuthengwa okungenasiphelo kweebhondi zikarhulumente waseJapan ukuzama ukukhuthaza uqoqosho. Ikwanethemba lokunyusa inkqubo yokunciphisa izinto ngobuninzi ukuphinda kabini ukuthengwa kweebhondi zeshishini kunye nephepha lezentengiso.
Nangona i-United States isungule inkqubo encinci yokuthenga iibhondi, uMax Bronstein, olilungu leqela leziko lotyalo-mali lokutshintshiselana nge-cryptocur lwemali uCoinbase, wathi "inkqubo yangoku iye yawa ngokupheleleyo."
Ngakumbi nangakumbi abantu bakholelwa ekubeni ii-asethi ezisemthethweni kunye nokunqongophala kwe-crypto ziya kuxhamla kule ndlela yokuya kwimali engaziwayo nakwimimandla yezemali xa kuthelekiswa nemali ye-fiat yeebhanki eziphakathi.
Owayesakuba ngumphathi weGoldman Sachs nomphathi wengxowa yeedge fund uRaoul Pal ucacisile kuhlelo luka-Epreli lwe "Global Macro Investors" ukuba ucinga ukuba singabona "inkqubo yethu yezemali isilela" okanye "imeko yangoku yezimali isiwa." ".
I-Bitcoin iya kuxhamla kakhulu kutshintsho olusuka kwinkqubo yezomthetho luye kwi-ecosystem yedijithali. Ngokubhekisele kwiBitcoin, uPal ubhale wathi: "Le yinkqubo yexabiso ledigital epheleleyo, ethembekileyo, eqinisekisiweyo, ekhuselekileyo, yezemali kunye neyezemali. Ikamva lenkqubo yethu yonke yorhwebo, imali ngokwayo kunye neqonga layo lokusebenza alipheleli apho. "
Wongeze ukuba i-Bitcoin inokuthi ifike kwi-100,000 yeedola kule minyaka mibini izayo, kwaye iphose ne-1 yezigidi zeedola xa umbono omkhulu utshintsha kakhulu.
Emva komgaqo-nkqubo "wokunciphisa ngokungenamda", ngaba iBitcoin isaya kuba "yindawo ekhuselekileyo ye-asethi" phantsi kwengxaki yemali? Kule meko, uMike Novogratz, u-CEO weGlass Digital, naye waxela kwangaphambili ukuba iBitcoin inokulandela igolide ngexabiso elibonakalayo, ikakhulu ngenxa yokuba ezi zinto zimbini zinqabile.
U-Xu Yingkai, iqabane elisekayo le-BlockVC, uthe ku-Weibo ukuba i-Bitcoin ye-3,800 USD inokuba yinto ephantsi yokuhla kweemarike. Emva kwesiqingatha seBitcoin (i-1-2 yeenyanga kamva), imarike yaqala ukubuyela ngokupheleleyo. Emva kokuba isiqingatha sigqityiwe, ngenxa yeliwa Ukuhla kwengeniso kuya kugxila kumaza wabasebenzi mgodini, kodwa uxinzelelo lokuthengisa mihla le kwintengiso luphindaphindiwe unyaka nonyaka, kwaye “ukufa” kulindeleke ukuba buthathaka kancinci kancinci .
Nangona kunjalo, abanye abantu kolu shishino bachaza ukuba "iiasethi ezikhuselekileyo zokuhlala" yingcamango endala, kodwa kuthathelwa ingqalelo ukuba iBitcoin inentengiso enkulu kwaye ukuthengiswa kwayo kunamandla kakhulu kunezinye iintlobo zemveli, imfuno yexesha elizayo ngokuqinisekileyo iya kuqhubeka inyuka. Ke ngoko, emva kwengozi, iBitcoin ngokuqinisekileyo iya kuphila ngokukhawuleza kuneeasethi zemveli zaseMelika. Ukusuka kule ndawo yokujonga, i-Bitcoin isenokuba nethemba elingcono, kodwa ngokwembono yentengiso yangoku, akukho bungozi buthintela.
Ngapha koko, emva kokuntywila ixesha elifutshane kwiBitcoin, eli xabiso linomtsalane kakhulu kwixesha eliphakathi nelide, kwaye isenokuba sisiqalo sentengiso yenkunzi elandelayo.
I-Bitcoin iqokelela amandla kwimarike yenkomo yexesha elizayo
Ingxelo epapashwe nguBloomberg yathi iBitcoin iqokelela amandla kwimarike yenkomo. Nokuba umxholo wale ngxelo uvakalise umbono ocacileyo we-bullish- "I-Bitcoin Maturity Great Leap Forward". I-Bloomberg ikholelwa ukuba kulo nyaka iBitcoin iya kugqiba uvavanyo oluphambili lotshintsho kwi-quasi-currency efana negolide.
Ingxelo ichaze uthotho lwezizathu zokuba kutheni imakethi yeBitcoin ikhula. Ingxelo ikwaqinisekisile ukuba "ukuba imbali inokusetyenziswa njengesikhokelo, iBitcoin ifumana amafutha xa kuthengiswa imarike yemasheya."
Ukongeza, iBloomberg ithe iBitcoin kunye negolide, ii-asethi ezimbini ezikhuselekileyo emehlweni abantu, kulindeleke ukuba zixhamle kakhulu kwezorhwebo lwamva nje olubangelwe sisifo sesithsaba esitsha.
Kodwa ngokutsho komhlalutyi we-cryptocurrency owaziwayo, ukuba iBitcoin ifikelela kwinqanaba elithile lamaxabiso, inokubangela ukurhweba kwintengiso, ngamanye amagama, amaxabiso emali anyukile.
NgoMgqibelo ophelileyo, abalandeli be-Twitter abangama-200,000 kunye nomrhwebi ogama linguCryptoYoda bakhuphe uthotho lohlalutyo lobuchwephesha, apho wachaza ukuba isakhiwo sentengiso seBitcoin sithanda ukuwa ngenxa yokwakheka kokumila okwenziwe ngombala kunye neepateni zamagxa-imiqondiso emibini ye-bearish echazwe Iincwadi zezifundo-kodwa ukuphumelela kweBitcoin kwe- $ 7475 kuya kuyitshintsha le meko, "kunyanzelwa iibhulukhwe ezimfutshane ukuba zisuse izikhundla zazo ngelixa zikhuthaza ukulangazelela ukuthenga ezi zithuba":
"Ukuphumelela kwinqanaba eliphezulu kangaka kuya kukhokelela kwisigqubuthelo esifutshane esikhulu, kwaye umthamo wee-odolo zokuthenga uya kuqhuba ngamandla, ngakumbi ukuba abathengi sele bengenile kwinqanaba lokumelana eliphantsi."
Into afuna ukuyichaza kukuba ukuba iBitcoin iphumelele ngempumelelo, ingangqina ukuba urhwebo lwangoku olusecaleni aluyonto ethetha ngentla, kodwa yinkqubo yokudityaniswa kunye nokuqhubeka kokunyuka okuphezulu, okunokufikelela kwi- $ 8,000 okanye nangaphezulu.
U-Avi Felman-umrhwebi kunye nomhlalutyi kwingxowa-mali ye-asethi ye-crypto iBlockTower-uqaphele imiqondiso emibini yezobuchwephesha ngolwesiHlanu odlulileyo obonakalise ngokucacileyo ukuba amaxabiso eBitcoin kungekudala aza kulungiswa:
Ulandelelwano lweDemark (Tom Demark Sequential) sisalathiso esisekwe exesheni, kwitshathi yesibane seentsuku ezi-3 kubonakala kulandelelana ngokulandelelana kokuthengisa. Imeko efanayo yenzekile kumaxesha amabini adlulileyo xa ixabiso lemali lehle phakathi ku-Matshi nango-Disemba 2019, kodwa lafikelela phezulu kwi-10 500 yeedola ekuqaleni kwalo nyaka.
I-Ethereum okwangoku ibonakala ngathi ayinakho ukugqitha kwiintsuku ezingama-50 kunye neentsuku ezingama-200 zomyinge oshukumayo wetshathi yezibane zeentsuku ezi-3.
Ukongeza, uDonAlt wathi nangona umgca wemihla ngemihla wangoku ungakhange ubonakalise "ukwehla okunamandla", "wawusondele kakhulu ekuveleni kweBitcoin ngaphezulu kwe- $ 10,000." Ucacisile ukuba imeko yexabiso leBitcoin lahlukile kuleyo kaFebruwari Ukufana kulwakhiwo lwangoku.
Ingxelo yeBloomberg "Ukukhula kweBitcoin Jump" uxele ukuba iBitcoin ilungiselela intengiso yenkunzi enkulu. Kule ngxelo, umbhali ucacisile ngolungelelwaniso phakathi kweBitcoin kunye nesalathiso se-S & P 500, igolide, zero kunye nexabiso lenzala elibi. Ngokwengxelo, isiphithiphithi kwintengiso yesitokhwe sikhawuleze ukutshintsha kweBitcoin iye "kwigolide yedijithali".
Kwi-2020, kuya kugwetywa ukuba i-Bitcoin inokutshintsha ukusuka kwi-asethi eyingozi yokuqikelela ibe "yigolide yedijithali". Ukusuka kwimbono yokungazinzi, ukungazinzi kweBitcoin kubonakala ngathi kwehlile, ngelixa imeko yentengiso yemasheya sele iqalile ukunyuka. Ukuphendula okunje kwintengiso kuya kuvumela abantu abaninzi ukuba bathumele imali kwiimpahla ezifihliweyo.
Ikhonteyina ye-btc, Isitya sebhitmain, asic imigodi asic, isikhongozeli se-antbox, kusetyenziswa izixhobo zemigodi ye-crypto, isikhongozeli somlilo,